थाहा पाउनुहोस्, स्वास्थ्यको लागि तातो पानी पिउने कि चिसो ठिक ?
डिसेम्बर 25, 2018 साइन्स इन्फोटेक	1 Comment डा. राम बहादुर बोहरा, पानी
तातो पानी पिउने कि चिसो ? साधारणतया ६ देखि ८ घन्टासम्म सुतिन्छ । त्यसैले यो बीचमा पानी पिइएको हुँदैन । लामो अन्तरालको बीचमा जब बिहान उठिन्छ । सबैभन्दा पहिले पानी पिउनुपर्छ । त्यसले शरीरको अनावश्यक कुरा पनि बाहिर निकाल्छ । पोषण विज्ञहरुका अनुसार औषत व्यक्तिलाई दैनिक ८ गिलास पानी चाहिन्छ ।
हामीले सामान्यतया तीन गिलास पानी पिसाब मार्फत् र अन्य दुई गिलास श्वास प्रश्वास तथा पसिन मार्फत खर्च गरेका हुन्छौँ । तसर्थ शरिरबाट गएको पानी पूर्ती गर्न पनि हामीलाई दैनिक सो परिणाममा पानी पिउनु आवश्यक छ । भारतको दी इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनका अनुसार महिलाले दैनिक ९ गिलास र पुरुषले ११ गिलास पानी पिउनुपर्छ ।
अधिकांश अनुसन्धानकहरूकर्ताहरूले पिउने पानी शरीरको तापक्रम अर्थात ९८.६ डिग्री फरेनहाइट बराबरको भएमा उत्तम हुने धारणा राख्दछन् । हुन त मानिसको शारीरिक अवस्था, धपेडी भएको अवस्था वा बाह्य मौसम जस्ता अवस्थाले पनि पिउने पानी तातो वा चिसो छनौटमा प्रभाव पार्दछन् । निश्चय नै थाकेको बेलामा, ज्वरो आएको बेलामा ब्यायाम बढी गरेको अवस्थामा चिसो पानी पिउँदा आनन्द आउने, सन्तुष्टि मिल्ने, शारिरीक स्वच्छता प्राप्त गर्ने स्थिति हुन्छ । तर, मानिसहरु शारीरिक दुवलता महसुस भएको अवस्था आदिमा तातो पानी पिउन चाहन्छन् ।
अनुसन्धानकर्ताहरु र चिकित्सकहरुले अनुभवको आधारमा चिसोभन्दा तातो पानी पिउँदा विभिन्न प्रकारका फाइदा धेरै हुने बताउँदै आएका छन् । यद्यपि, यस तथ्यमा पनि मतैक्यता नहुन सक्तछ । जे होस्, तातो पानी पिउँदा जति फाइदा छ, त्यति फाइदा चिसो पानी पिउँदा नहुन सक्तछ । चिसोपानी पिउँदा हाम्रो पाचनप्रणाली अर्थात पेटमा भएका ससाना नसा र धमनी खुम्चिन्छन्, जसबाट खाएका खाना हाम्रो शरीरमा सोस्ने प्रक्रिया ढिलो हुन जान्छ भन्ने वैज्ञानिक तथ्य अघि आएको छ ।
← सुन्तला खाँदा हुने फाइदाहरु
कार्टुन चलचित्र कसरी बनाइन्छ ? →
जुलाई 13, 2019 जुलाई 13, 2019 साइन्स इन्फोटेक 1
One thought on “तातो पानी पिउने कि चिसो ?”
Pingback:चिसो पानीले नुहाउँदा हुने फाइदाहरु